AKHRISO:-Wararkii ugu Dambeeyay Dagaalka Somaliland & Puntland | Saadaal Media
AKHRISO:-Wararkii ugu Dambeeyay Dagaalka Somaliland & Puntland
Wararka naga soo gaaraya degaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi wali ay ka taagan tahay xiisad u dhaxeysa maamulada Somaliland iyo Puntland.
Dadka degaanka ayaa xaqiijiyay in maamulada Somaliland iyo Puntland ay xalay Ciidamo badan geeyeen degaanka Tukaraq iyo degaanada hoos yimaada.
Ciidamada Somaliland ayaa wali gacanta ku haaya degaanka Tukaraq iyo sidoo kale degaanada hoos yimaada, waxaana Puntland ay doonaysaa in ay gacanteeda kusoo celiso degaankaasi oo fariisin u ahaa ciidamada Puntland.
Madaxweynaha maamulka Puntland C/wali Maxamed Cali (Gaas) ayaa sheegay 9-dii bishan Ciidamo laga soo abaabulay magaalada Hargeysa in ay duulaan ku soo qaadeen degaanka Tukaraq oo ka tirsan Gobolka Sool, wuxuuna sheegay dagaalka inuu ku soo aaday xilli booqasho uu Puntland ku joogo Madaxweynaha Soomaaliya.
Somaliland ayaa dhankeeda sheegtay in Puntland ay dhowr jeer kusoo qaaday Weeraro daandaansi ah.
Xog xiligan laga helanyo goobka labada dhinac isku hayaan ayaa sheegaysa in inta badan dadkii kunoolaa degaanada ay isku horfadhiyaan Ciidamada Somaliland iyo Puntland in ay barakaceen.